HERINANDRO MASINA 2017: Alatsinainy 10/04/2017 Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
NDAO HANARAKA NY DIAN’I JESOSY ISIKA (ALATSINAINY)
Ndao isika hanaraka ny dia nandalovan’i Jesosy nandritra ny herinandro masina. Ny Alahady dia tsy iverenako intsony satria efa nankalazaintsika tamin’ny alahadin’ny sampandrofia teo. Ny Alatsinainy vao maraina dia niakatra nankany Jerosalema i Jesosy. Teny an-dalana Izy dia noana ary nahita aviavy ka nanantena mba hahita voa hohanina. Nefa kay raviny fotsiny no nandrobona fa tsy nisy voany, dia nozonin’i Jesosy izany mba tsy hamoa intsony.
Mitady voa vokatry ny fibebahana Jesosy, mandalo eo aminao Izy isan’andro fa tsy androany ihany, hahita voa ve Izy? Sa halahelo sy ho diso fanantenana satria endrika ivelany mahasodoka sy fisehoana ivelany feno fisehosehoana fa ny ao anaty feno aizin’ny fahotana! Antsoy haingana i Jesosy hanadio sy hamela heloka mba tsy ho tratry ny nenina isika.
Rehefa tonga tao amin’ny kianjan’ny Tempoly i Jesosy dia nalahelo mafy sady tezitra raha nahita ny tranon’ny Rainy nanaovana varotra sy nanaovana fitadiavan-karena (Lio 19:46). Nodioviny ny Tempoly.
Tsy ny varotra vorona sy biby hatao fanatitra akory no nahatezitra Azy satria efa fanao hatramin’izay izany, fa ireo izay manana toe-tsaina hitady harena nefa ny fony tsy ao amin’ny fivavahana akory. Trano natao ihaonana amin’Andriamanitra ny Tempoly, manatrika ao Andriamanitra hiteny sy hihaona amin’Israely fa tsy toerana natao hitadiavana harena akory izany.
Tamin’ny alina dia lasa nivahiny tao amin’ny namany tao Betania i Jesosy angamba tao an-tranon’i Maria sy Marta ary Lazarosy izany.
Ny Fiangonana dia toerana ihaonantsika amin’i Jesosy fa tsy toerana mitovy amin’ny toerana hafa rehetra. Manatrika ao Andriamanitra, mampanetry tena antsika Izy, mihaino antsika Izy, miteny amintsika Izy. Tsy toerana fisehosehoana na filan-karena politika ny Fiangonana, tsy toerana fanaovana politika maloto ny Fiangonana, esory haingana ao ny fizarazarana, diovy ny toetsaina rehetra mahatonga fitsitokotokoana izay mandoto ny Fiagonanana. Saro-piaro amin’ny tranony Andriamanitra, masina loatra aminy izany satria toerana ipetrahany sy onenany.
Mat 21:12–22, Mar 11:15–19, Lio 19:45-48, Jao 2:13-17.